Ukuhlaselwa kweMfazwe yaseVietnam kunye neMelika
Ukuhlaselwa kweMfazwe yaseVietnam kunye neMelika yase-1964-1968
Ukuqhuma kwemfazwe yaseVietnam kwaqala ngeGulf of Tonkin. Ngo-Agasti 2, 1964, u-USS Maddox , umonakalisi waseMelika, wahlaselwa kwiGulf of Tonkin ngamatye amathathu aseNyakatho yaseVietnam eseTurkey ngenkathi eqhuba umsebenzi weengcinga. Ukuhlaselwa okwesibini kubonakala ngathi kwenzeke ezimbini iintsuku kamva, nangona iingxelo zazingumfanekiso-mfanekiso (Ngoku ubonakala ukuba akukho kuhlaselwa kwesibili). Lesi sibini "ukuhlaselwa" saholela ekuhlaselweni kwamabutho ase-US ngokumelene neNyakatho yeVietnam kunye nokuhamba kwe-Southeast Asia (Gulf of Tonkin).
Esi sigqibo samvumela umongameli ukuba enze imisebenzi yemikhosi kummandla ngaphandle kokumemezela ngokusemthethweni imfazwe kwaye yaba ngumgwebo osemthethweni wokunyusa ukuxabana.
Ukuqhuma kweBhomu kuqala
Ukubuyisela isiganeko kwiGulf of Tonkin, uMongameli uLyndon Johnson wakhipha umyalelo wokuqhubhisa ibhomu yaseNyakatho yeVietnam, ukujolisa ekukhuselweni komoya, kwiindawo zoshishino nakwiziseko zokuthutha. Ukususela ngo-Matshi wesi-2, ngo-1965, kwaye kwaziwa ngokuba yi-Operation Rolling Thunder, umkhankaso wokuqhubhisa ibhomu wawuza kudlula iminyaka emithathu kwaye wawuza kuhlawula i-tani ezili-800 zeebhomu ngeentsuku ngosuku. Ukukhusela iziseko zomoya zaseMzantsi Afrika eMzantsi Vietnam, ama-Marine ama-3 500 asetyenziswe ngaloo nyanga, ibe yinto yokuqala yomkhosi eyenziwe kwimpikiswano.
Ngo-Ephreli 1965, uJohnson uthumele amabutho aseMelika angama-60,000 e-Vietnam. Inani liza kukhula ukuya kuma-536,100 ekupheleni kuka-1968. Ehlobo lika-1965, ngaphantsi komyalelo kaGeneral William Westmoreland , amabutho ase-US ayenze imisebenzi yabo yokuqala yokuhlambalaza ngokumelene neVong Cong kwaye bafumana ukunqoba kweChi Lai (Operation Starlite) kunye Ia Valley yaseDrang .
Eli phulo lokugqibela lalwa yi-1st Air Cavalry Division eyayiphayona ukusebenzisa i-helicopter ukuhamba ngokukhawuleza kwinqanaba lokulwa.
Ukufunda kule ngqobhoko, iVuong Congress ibuye iphinde ibandakanye amabutho aseMerika kwiindibano eziqhelekileyo, ezikhethiweyo ezikhethiweyo kunokukhetha ukuhlasela nokuhlaselwa nokuhlaselwa.
Kwiminyaka emithathu ezayo, amabutho aseMerika agxininise ekuphenyweni nasekubhubhiseni iVin Cong kunye neeyunithi zaseNyakatho zaseVietnam ezisezantsi. Ngokukhawuleza ukuphakanyiswa kwamanzi amaninzi afana ne-Operations Attleboro, eCedar Falls, kunye neJunction City, i-American kunye ne-ARVN.
Isimo sezopolitiko eMzantsi Vietnam
E-Saigon, imeko yezopolitiko yaqala ukuzola ngo-1967, ngokunyuka kuka Nguyen Van Theiu ukuya kwinhloko yoRhulumente waseMzantsi Vietnam. Ukunyuka kukaTheiu ku-uongameli kuzinzile uhulumeni kwaye kwagqitywa uchungechunge olude lwezempi zamajoni ezaziphethe ilizwe ukususela ekukhutshweni kukaDiem. Nangona kunjalo, iMelika imfazwe ibonisa ngokucacileyo ukuba abaseMzantsi Vietnam babengenakukwazi ukukhusela ilizwe ngokwabo.
Ukuqonda i-Gaslighting kunye neMiphumo Yalo
Isifundo se-IELTS samahhala kwi-intanethi
Fumana Abadala Bakho KwiiRekhodi ZamaPensi aseMelika aseMelika